Abadlali abaPhambili beMidlalo yokuGqubutha yeGalati
Abadlali abaPhambili beMidlalo
Amaqiniso, imbali, abaphumeleleyo begosa eliphezulu legalufa
Omnye wabazuzi abahlanu kwiiNtshatsheli zeeMidlalo (kodwa kungabalwa njengeyona ngundoqo kwiThupha leMatriki yaseYurophu), isihloko esipheleleyo, esikuyo sihloko siCompellation yamandla abaPhathi beMidlalo abaPhambili. I-Constellation Yamandla ibe ngumxhasi ophethe isihloko ukususela ngo-2007.
Umqhudelwano wasungulwa ngowe-1983, ukujoyina i- Senior PGA Championship kunye ne- US Senior Open njengezikhundla eziphezulu ngeli xesha. Le tourney yiyona nkcazo ephezulu yegalufa ye -Players Championship kwi-PGA Tour, kunye nabaphumeleleyo beMidlalo yokuPhumela abaPhathi beMidlalo bafumana ukukhululwa kwi-Players Championship yonyaka olandelayo.
Xa: ngoJulayi 12-15
Kuphi: Iqela leLizwe eliphumayo kwi-Highland Park, i-Ill.
UBernhard Langer noBritht Jobe babenomngcipheko wokubamba u-Scott McCarron kunye nokunyanzela, kodwa akazange enze i-putt. Kwaye kwenza uMcCarron iqela. UMcCarron wadutshulwa 66 kwinqanaba lokugqibela ukuya kuLanger ka-73 no-Jobe wama-72 kwaye wagqiba ngo-18-ngaphantsi kwe-270.
U-15-foot foot-saving putt kwisibopho sokugqibela wanika uBernhard Langer inquba yesithathu ngokulandelelana kule nkulu ephezulu. ULanger, owamnqoba ngo-2014-15, wamphosa u-73 kwinqanaba lokugqibela ukugqiba ngo-1-ngaphezulu kwe-281. Wayekhupha umgodi ongama-71 kwaye wayenenkathazo emngxuma wokugqibela emva kokuhamba ngendlela yokuhamba kunye nokuya kwi-bunker. ULanger waxoshwa ngaphandle kodwa wasala nge-15 footer for par. Ukuba wayekuphosakele, wayeya kuba yinto ebhekene nabadlali beMiguel Angel Jimenez noJoe Durant.
Abadlali abaPhambili beMidlalo yokuThola iMidlalo
Izimbobo ezingama-72: 261 - UJack Nicklaus, ngo-1990; UKenny Perry, ngo-2013
Izimbobo eziyi-18: 62 - Olin Browne, 2012
Iikholeji zeGadgetball Championship
Umdlalo ngowama-2017 kwiCalves Valley Golf Club eBaltimore, emva kokuba kwenzeke ngo-2016 kwi-Club yaseChiladelphia eCricket Club ePennsylvania.
Umqhubi utshintshe iiindawo eziliqela kwiiyembali. Ukususela ngo-1993-2006, i-TPC Michigan yayisayithi yomcimbi. Emva koko, kwenzeke eWestchester Country Club eNew York. Ukususela ngo-1983-86, yadlala kwiCanterbury Golf Club. Ezinye iikhosi zokubamba iMidlalo yabaPhathi abaPhambili zibandakanya iSawgrass Country Club, iNtambo yeNtlambo kwi-TPC Sawgrass, i-Dearborn Country Club, iBaltimore Country Club kunye ne-TPC Potomoc.
Abadlali abaPhambili beMidlalo kunye neNqaku
Abadlali abane begalufu bawine uMqhudelwano oPhezulu lwabaPhambili ngaphezu kweyodwa: Arnold Palmer (1984-85), uDave Stockton (1992, 1994), uRaymond Floyd (1996, 2000) noBernhard Langer (2014-15-16).
Hhayi nje kuphela uLanger kuphela ophumelele ixesha eli-3 kuphela, kodwa ukuphumelela kweLanger kwafika kwiminyaka elandelelanayo, ngo-2014, 2015 no-2016.
UJack Nicklaus wasondela ekudibaneni kwesibini. Emva kokuphumelela ngo-1990, uNicklaus walahlekelwa umdlalo we-1995 kwi-JC Snead.
Xa uNicklaus anqobile ngo-1990, wabeka irejista engama-72 ekukhokheni irekhodi ye-261. Ngo-2013, uKenny Perry wafanisa irekhodi likaNicklaus.
Abadlali abathathu begalufa baye bawubamba i-Players Championship kwi-PGA Tour kunye ne-Senior Players Championship kwi-Tour Tours: Nicklaus, Floyd noFred Couples .
Abaphumeleli beMidlalo abaPhambili
(p-won winyoff; w-mfutshane ngemozulu)
I-Constellation yamandla abaPhathi beMidlalo abaPhambili
2017 - UScott McCarron, 270
2016 - UBernhard Langer, 281
2015 - uBernhard Langer, 265
2014 - UBernhard Langer-p, 265
2013 - uKenny Perry, 261
2012 - uJoe Daley, 266
Ngo-2011 - UFred Couples-p, 273
2010 - uMark O'Meara-p, 273
2009 - Jay Haas, 267
2008 - DA Weibring, 271
2007 - uLorn Roberts, 267
I-Ford Senior Players Championship
2006 - UBobby Wadkins, 274
2005 - uPeter Jacobsen, 273
2004 - uMark James, 275
2003 - uCraig Stadler, 271
2002 - uStewart Ginn, 274
2001 - U-Allen Doyle-p, 273
2000 - uRaymond Floyd, 273
Ngo-1999 - uHale Irwin, 267
1998 - UGil Morgan, 267
1997 - uLarry Gilbert, 274
1996 - URaymond Floyd, 275
1995 - JC Snead-p, 272
1994 - uDave Stockton, 271
Ngo-1993 - uJim Colbert, 278
I-Mazda Ikhona Abadlali abaPhambili beMidlalo
1992 - uDave Stockton, 277
Ngo-1991 - uJim Albus, 279
I-Mazda Senior Tournament Players Championship
1990 - uJack Nicklaus, 261
Ngo-1989 - u-Orville Moody, 271
1988 - UBilly Casper, 278
1987 - UGary Player, 280
AbaPhambili beMidlalo yokuThuthukisa abadlali
1986 - Chi Chi Rodriguez-w, 206
1985 - uArnold Palmer, 274
1984 - uArnold Palmer, 276
1983 - UMiller Barber, 278
I-PGA Tour Vardon Trophy ephantsi kakhulu
Ibhanki Yentengiso Qatar Masters
Shintsha i-Wavelength ukuya kwi-Frequency Work Work Example Problem
Ilungisa izixhobo ezisebenzayo zokuLawula
UMarko Twain: Ubomi Bakhe kunye noKhuseleko lwaKhe
Kutheni Utywala Umthetho?
Isikhokelo sokubhala iiNcwadi zoNconywa
I-Outcrops ngokuchasene ne-Exposures, i-Essay
Ivili ligqiba: Hypersilver
Alcatraz Ghost Stories kwiSeli 14D kunye neNinzi
UYesu uthandaza eGetsemane
Ingqwalasela yeKhalenda yamaSilam
Izinto zokuthetha noNjingalwazi wakho malunga
Inkqubo yokuGaya: UkuNciphisa kwamanzi
Kutheni kubizwa ngokuba yi "IKhabhinethi"
I-Apollo 11: Abantu bokuQala ukuPhuma kwiNyanga
Landela eli LikaThixo I-Order Order for Properties Sentences
Iingcebiso zokukhumbuza indlela yokuchaza uLwesithathu kunye namanye amazwi anamaqhinga
Eminye Imibuzo Ebuzwa Ngokuphindaphindiweyo Ngomfanekiso Wemibala Yesiko
4 Iingxoxo eziKhuseleko eziKhuselekileyo zeKlasi
Amazwi aseJamani ayaKhusela: i-Slang Glossary ekhethekileyo